Nezvedu - Beijing Sincoheren S & T Development Co, Ltd.
Isu, Beijing Sincoheren S & T Development co., Ltd, yakavambwa muna 1999, hofisi yepamusoro iri muBeijing, China, parizvino ine hofisi kuGerman, USA neAustralia, inyanzvi hi-tech inogadzira yekurapa uye yekushongedza chishandiso, ine hupfumi ruzivo pane indasitiri yerunako.
Isu tine yedu dhipatimendi reKutsvagisa & Kubudirira, fekitori, madhipatimendi ekutengesa epasi rese, uye nzvimbo yekushandira mhiri kwemakungwa, inopa yedu yese pamusoro pevatengi China mutengo wefekitori asi yemuno mushure mebasa.
Kubva pakagadzwa makore makumi maviri apfuura, Sincoheren anga achitevedzera musimboti we "mutengi kutanga, sevhisi kutanga", ichipa vatengi vedu pasi rese zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi epamusoro, ichipa dzidziso yemahara kune wese mutengi, uye muchina wega wega vane Mahara mushure-yekutengesa sevhisi uye kugadzirisa, tarisiro yekuti mutengi wese anozove mutsigiri wezvigadzirwa zvedu mushure mekutanga kubatana pamwe nesu.
Ndinokutendai nekuvimba kwenyu uye sarudzai kushandira pamwe nesu, ndinovimba isu pamwe chete tingaita kuhwina-kuhwina runako bhizinesi.
Parizvino, isu tine mafekitori maviri, imwe iri muBeijing, China, uye imwe iri muSenzhen, China. Zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa zvinoenderana nemitemo yakasimba yezvakanaka michina. Vashandi vese vachapihwa dzidziso-dzese vasati vatanga kushanda.
Zvese zvigadzirwa zvinosangana nemhando yepamusoro uye zviyero, zvigadzirwa zvese zvine zvitupa zveEC, uye zvimwe zvacho zvakawanawo zvitupa zveUS FDA
1. mudziyo wedu wese uchapa yemahara kosi yekudzidzira uye emahara zvitupa zvekudzidzisa.
2. mutengi achagamuchira bhuku rekudzidzisa bhuku uye vhidhiyo yekudzidzisa
3. on-line yekudzidzira kosi, nyanzvi yekudzidzira kiriniki chiremba achapa tsananguro yakadzama nezve chishandiso mashandiro
4. Door to Door yemuno kurovedzwa zvakare ichave ichapihwa needu emuno murairidzi, kana vedu mhiri kwemakungwa vashandi.
Warrenty uye Mushure meSevhisi
1. Mudziyo wedu wese unopa warandi yemahara yemakore maviri uye Hupenyu Husingaperi hwekuchengetedza, musika wega wega unenge uine mainjiniya echinhu chimwe nechimwe.
2. yemunharaunda mushure mekushandira ichapihwa kuGerman neUSA.